musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nzvimbo nyowani yechikwereti yakaziviswa nePlus
ePlus Inc. uye SLAIT Consulting, LLC nguva pfupi yadarika yakagadziridzwa, kudzoreredzwa uye nekutsiva muzvizere zvibvumirano zvavo zvekwereti ne Wells Fargo Commerce Distribution Finance Corporation.
ePlus inc., Anotungamira mupi wezve tekinoroji uye mhinduro dzemari, nhasi yazivisa kuti ayo anobatsira ePlus Technology, inc., EPlus Technology Services, inc. uye SLAIT Consulting, LLC nguva pfupi yadarika yakagadziridzwa, kudzoreredzwa uye nekutsiva muzvizere zvibvumirano zvavo zvekwereti ne Wells Fargo Commerce Distribution Finance Corporation.
Nzvimbo nyowani yechikwereti inosimbiswa nesangano remabhangi ayo CDF inoshanda seanomiririra uye inove nenzvimbo yevakuru yakachengetedzwa yepasi pasi inofarira Vanokwereta muhuwandu hwehuwandu hwemari inosvika madhora mazana matatu nemakumi mashanu nemashanu emadhora, kuwedzera kubva pamadhora mazana makumi maviri nemashanu, pamwe ine sublimit yechinotenderera chikwereti nzvimbo inosvika kumadhora zana mamirioni.
Huwandu hwehuwandu hwehukuru huripo pasi penzvimbo nyowani yechikwereti iri pasi penzvimbo yekukwereta yakavakirwa pane, pakati pezvimwe zvinhu, maakaunzi eAnokwereta anogamuchirwa uye enhamba, imwe neimwe ichitevedzera fomula uye inoenderana nezvimwe zvakachengetwa. Iyo nyowani yechikwereti nzvimbo ine yekutanga-gore rimwe gore izwi iro rinongoerekana radzokorodza kune anoteedzana-egore rimwe mazwi shure kwaizvozvo; zvisinei, chero bato rinogona kupera nechiziviso chakakodzera.
"Iyi yakagadziridzwa kiredhiti inotsigira kukura kwedu uye sevhisi kune vatengi vedu vanokosheswa seanotungamira wekupa mhinduro dzepamberi," akadaro Elaine Marion, mukuru wezvemari. “Tinokoshesa zvikuru hukama hwedu hwenguva refu neCDF, mabhanga edu matsva esangano, uye tinotenda rutsigiro rwakaenderera rwe eUyezve. ”